नाक चिलाउने समस्या लिएर अस्पताल पुगेका विरामीको जाँच गर्दा डाक्टरको उड्यो होस ! - Naya Pusta
नाक चिलाउने समस्या लिएर अस्पताल पुगेका विरामीको जाँच गर्दा डाक्टरको उड्यो होस !
सुरुमा नाक चिलाउने र पछि नाकबाट रगत नै बग्न थालेको समस्या लिएर अस्पताल पुगेका एक वृद्धको नाकले डाक्टरहरुलाई समेत झसँग बनायो।
यसलाई चिकित्सा भाषामा माइयासिस भनिन्छ । नाकभित्रका लार्भालाई एकैचोटी बाहिर निकाल्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले नाकभित्र नुनपानी खन्याउँदै दिनका दिन डाक्टरहरुले भित्रका लार्भा बाहिर निकाल्दै गए र त्यसक्रममा नाकको इन्डोस्कोपी समेत गरियो । नाकभित्रका पूरै किरा निकाल्न डाक्टरहरुलाई ४ दिन लाग्यो । उनी अहिले पूर्ण रुपमा स्वस्थ बनिसकेका छन् । तर नाकभित्र किराको गुँड भएको पहिलेको अवस्था सम्झिँदा भने झसँग हुँदारहेछन् । -एजेन्सी
कफीको प्रयोगबाट यसरी बनाउनुहोस् अनुहारलाई चम्किलो र सुन्दर (विधिसहित)
श्री स्वस्थानी ब्रतकथा – भाग ३१ (भिडियो सहित)
पातलो र छोटो कपाललाई १५ दिनमै यसरी बनाउनुहोस् लामो र बाख्लो (विधिसहित)